Nidaroka baomba Tanàna Libaney i Israely Taorian’ny Daroka Baomba Amoron-dalana Nolazain’ny Hezbollah Fa Nataony · Global Voices teny Malagasy
Nidaroka baomba Tanàna Libaney i Israely Taorian'ny Daroka Baomba Amoron-dalana Nolazain'ny Hezbollah Fa Nataony
Voadika ny 11 Janoary 2016 5:57 GMT
Tel Faher, tobim-pitrandrahana manodidina ny toby miaramila Syriana teo aloha, ao amin'ny faritry ny toeram-piompiana Shebaa. Sary avy amin'ny Chaver83 via Wikipedia.
Nidaroka baomba ny tanàna Libaney atsimo ao Al-Wazzani akaikin'ny sisintany eo anelanelan'ny firenena roa tonta ny tafika Israeliana tao anatin'ny fanafihana valifaty amin'ny antoko politika sady vondrona milisy Hezbollah. Nitatitra ny haino aman-jery ao an-toerana fa nisy ireo naratra.
Niseho ny tifitra ho valin'ny daroka baomba amoron-dalana tamin'ny fiaran'ny miaramila Israeliana tao amin'ny faritra fambolena sy fiompian'i Shebaa, ary nilaza ho tompon'andraikitra tamin'izany ny Hezbollah. Raha nilaza ny vondrona fa nandratra miaramila tao anaty fiara Hummer ny fanafihan'izy ireo, dia nanamafy kosa ny mpitondratenin'ny Tafi-piarovana Israeliana, Peter Lernet fa tsy nisy ny niharam-boina tamin'ny zava-nitranga.
Manahoana @Brian_Rohan @AP tsy nisy ny naratra na maty tamin'ny tranga niseho.
Nandritra ny kabary tamin'ny fahitalavitra tamin'ny 21 Desambra 2015, nampanantena ny Sekretera Jeneralin'ny Hezbollah, Hassan Nasrallah fa hamaly faty ny fahafatesan'ny komandà, Kuntar Samir maty tamin'ny daroka baomba an'habakabaka tao Damaskosy ny vondrony, izay niampanga an'i Isiraely. “Mety ho diso fandray ny fahavalo lsraeliana … Ary nihevitra ny Israeliana fa tsy mana-danja amin'ny Hezbollah i Kuntar ka tsy nieritreritra fa hamaly faty ny naha-lasa martiora azy izahay,” hoy i Nasrallah.
Iza i Samir Kuntar?
Taorian'ny famotsorana azy tao amin'ny fonja Israeliana nandritra ny fifanakalozana gadra tamin'ny 2008, nisondro-daza tao anatin'ny Hezbollah i Kuntar, ary miady ao Syria hanohana an'i Bashar al-Assad mifikitra amin'ny fahefana manohitra ireo hery te hahita ny fionganan'ny fitondrany ny Hezbollah. Voampanga ho namono olona tamin'ny fakàna an-keriny sy famonoana raim-pianakaviana Israeliana sy ny zanany vavy 4 taona tamin'ny 1979 izy raha mbola mpikambana tao amin'ny Mandan'ny Fanafahana an'i Palestina. Nanempotra tsy nahy ny zanak'izy ireo hafa, 2 taona, kosa ilay renim-pianakaviana raha niafina tamin'ireo niditra tao an-tranony. 16 taona i Kuntar tamin'izany fotoana izany.
Nanaiky i Kuntar, izay voatifitra tao anatin'ny fitifirana miaraka amin'ny polisy, tany am-boalohany fa tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesana izy, saingy avy eo nihizingizina izy fa tsy nisy ifandraisany tamin'izy ireo. Nilaza izy fa nikasa fotsiny haka takalon'aina izy sy ny ekipany ary ny tifitra Israeliana no tena namono ilay raim-pianakaviana ; nilaza izy fa tsy fantany ny nahatonga ilay zazavavy ho maty voadaroka.
Natao tsinontsinona tanteraka izy tao Isiraely, saingy nahazo voninahitra tamin'ireo mpitarika ao Libanona, Syria sy Iran tamin'ny famotsorana azy. Voalaza fa niasa tao amin'ny manodidina ny havoanan'i Golan Heights bodoin'ny Israeliana izy mba hanafaka ny faritra, izay lasan'i Israely tamin'i Syria tamin'ny taona 1967 ary nakambana taminy tamin'ny taona 1981 na dia teo aza ny fiampangan’ny Filakevim-piarovan'ny Firenena Mikambana.
Nomena ny anaran'i Kuntar ny vondrona izay nolazain'ny Hezbollah fa nanatontosa ny daroka baomba amoron-dalana.
Tsy vao voalohany ny tafika Israeliana sy ny Hezbollah no nifampitifitra manamorona ny sisin-tany. Tamin'ny taona 2006, Libaney maherin'ny arivo ary Israeliana teo amin'ny 150 teo no namoy ny ainy tao anatin'ny Ady naharitra 34 andro tamin'ny volana Jolay. Nanatontosa fifanarahana hampitsaharana ady ny Firenena Mikambana tamin'izany fotoana izany.
Nitatitra ireo fifamalivalian'ny fanafihana ilay mpikatroka sady mpanao gazety, Joe Carton, ary nanameloka ny fihetsik’ i Isiraely:
Nidaroka baomba indray ny Hezbollah taorian'ny famonoan'i Israely an'i Samir Kuntar tany Damaskosy tamin'ny 19 Desambra.
Israely ihany no afaka nibodo ny ampahany amin'ny firenena roa, midaroka baomba ny iray, ary midaroka baomba ny iray hafa, milaza fa lasibatra avy eo. Manantena hitomany avy eo.
Mpisera maromaro no nisioka tamin'ny diezy toeram-piompiana Shebaa mba haneho fanohanana ny andraikitra raisin'ny Hezbollah:
Ny fasan'ny fikambanana Sionista #ShebaaFarms
Tao an-tendrombohitra, ambadiky ny havoana, ho resy ianao, ho resy ianao #ShebaaFarms
Voninahitra ho an'ny Hezbollah #ShebaaFarms
Mpisolovava iraisampirenena sady mpanao fanadihaiana ao Afovoany Atsinanana, Arsen Otrovsky, nitsikera ny Tafika Vonjimaikan'ny Firenena Mikambana ao Libanona (UNIFIL):
Ahoana ny amin'ny UNIFIL manao ny asan'izy ireo ary manakana ny Hezbollah tsy hitifitra ao Israely voalohany?
Ny Hezbollah dia naorina tamin'ny 1982 nahazo ny fanohanan'i Iran, taorian'ny fananiham-bohitra Israeliana ao atsimon'i Libanona, matanjaka kokoa noho ny tafika Libaney ny Hezbollah ankehitriny ary matetika faritana ho “fanjakana iray ao anatin'ny fanjakana.”